Ederede nke Virginia Jacko na Martech Zone |
Edemede site na Virginia Jacko
Maka ndị njikwa weebụsaịtị na ọtụtụ azụmaahịa, nnukwu na obere, oge a gara aga bụ oge oyi nke enweghị afọ ojuju ha. Malite na Disemba, akpọrọ ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe nka na New York City na ikpe, na ọ bụghị naanị veranda ahụ. Emeela ka ọtụtụ narị suut gbara akwụkwọ na nso nso a megide azụmaahịa, ụlọ ọrụ ọdịbendị, otu ndị na-akwado onwe ya na ọbụlagodi ihe ngosi Beyonce, bụ onye akpọrọ websaịtị ya ka ọ bụrụ ihe omume ịgba akwụkwọ gbara akwụkwọ na Jenụwarị. The vulnerability na ha nwere na-emekarị? Ebe nrụọrụ weebụ a abụghị